Iibso gaarigeyga - Iibso gawaaridaada internetka - Carros.com
Ku dheji xayeysiis. Iibso gaarigaaga dhibaatooyin la'aan. Gawaarida leh sawirro badan iyo sharraxaad wanaagsan ayaa si dhakhso leh loo iibiyaa.
Ma ganacsade ayaad tahay? Baro astaamaha aan kuu hayno. Arag in badan
Galka (Sawirada aan xadidneyn, *.jpg, *.jpeg, *.png)
Jiid oo sawirro sawirada
Guji si aad u gashid sawirrada
Kudar sawirro dheeri ah
Ku saabsan gaarigaaga
Tusaale ILX ILX Hybrid MDX MDX Sport Hybrid NSX RDX RL RLX RLX Sport Hybrid RSX Rapide TL TLX TSX ZDX
Summaddiina ama moodelkiinu ma maqan yahay? Nagala soo xiriir
Style Dooro ikhtiyaar Baska La bedeli karo Coupe Hatchback Minivan Pickup Gaadiidka Sedan SUV Van Kuwa kale
Gudbinta Dooro ikhtiyaar Automatic Buug-yarahan Semi-automatic
Sannad Dooro ikhtiyaar 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923
Macluumaad dheeraad ah (Ikhtiyaar)
Dhululubada Dooro ikhtiyaar 1 silyley 2 dhululubada 3 dhululubada 4 dhululubada 5 dhululubada 6 dhululubada 8 dhululubada 10 dhululubada 12 dhululubada
Nooca unugga Dooro ikhtiyaar 4x2 4x4 AWD FWD RWD
Nooca shidaalka Dooro ikhtiyaar Shidaalka Diesel Hybrid Koronto GNV GLP Kuwa kale
Midab Dooro ikhtiyaar Beige Madow Buluug Brown Golden Gray Green Orange Pink Midab Casaan Silver White Yellow
Tilmaamo kale (Ikhtiyaar)
U oggolow kuwa wax iibsadaa inay si wanaagsan u ogaadaan gaariga aad iibinayso si ka wanaagsan.
Kursiga dambe ee laab
Nalalka hore ee shirkadda Xenon
Rakibada boorsooyinka saqafka
Bacda hawada lagu wado
Qaybiyaha xoogga bareeg elektiroonig ah
Nidaamka qufulka gubida
Nalalka ceeryaanta hore
Airbag ga wadaha iyo rakaabka
Nalalka ceeryaanta gadaal
Baarka duudduuban ee Anti
Iftiinka bareega seddexaad ayaa hogaaminayay
Bacda hawada daah
Xulo kaliya haddii gaarigaagu uusan rasaastu karin. Haddii aad doorato ikhtiyaarkan oo macluumaadku been yahay, boostadaada waa la tirtiri doonaa oo koontadaada ayaa la mamnuuci doonaa.
Gaarigeygu ma gaashaaman Heerka 3 Heerka 4 Heerka 5 Heerka 6 Heerka 7
Is hagaajinta dhererka isteerinka
Xakamaynta korantada ee muraayadaha indhaha gadaal
Nalalka hore ee leh toosin toos ah
Kursiga dambe ee kuraasta
Kursiga darawalka lagu hagaajin karo
Waxaa lagu dhejiyay maqaar
Qalabka dareeraha gaariga
Siidaynta jirridda fog
Qufulka albaabka korontada
Xidhitaanka muraayadda otomaatiga ah
Haysta taayirrada dayactirka
Gobolka / Gobolka Dooro gobolka ama gobolka Kuwa kale
Magaalada / Gobolka Dooro magaalada ama gobolka Kuwa kale
Koodhka boostada Ma aqaan koodh lambarkeyga ah
Ku soo celi akoonka emailka
"Hubi inay macluumaadkaasi sax yihiin. Haddii kale qoraalkaaga waa la tirtiri karaa isla markaana koontadaada ayaa la mamnuuci karaa."
Ma ganacsade ayaad tahay?
Ku xayeysii ganacsade si aad u iibiso baabuur badan una gaadho macaamiil badan.
Guji si aad waxbadan ubarato.
Sida loo iibiyo gaarigaaga
Buuxi foomka iibka, maskaxda ku hay in beeraha cagaaran loo baahan yahay.
Geli meesha macluumaadka goobta gaarigaaga, baabuurkaagu wuxuu arki doonaa dalka, gobolka iyo magaalada aad dooratay.
Fiiri sawirada gaarigaaga. Waxay noqon karaan nooc kasta oo baabuur ah, cusub, loo isticmaali jiray, duug ah, mid caadi ah oo xitaa jebiyey.
Guji sii wad si aad u daabacdo gaarigaaga.
4.3/5 - 6466 codadka
Keliya dadka daabacay gaarigooda iibka waxay u qalmi karaan adeeggan.
Nagala soo xiriir haddii ay dhibaato kaa haysato buuxinta foomkan